“वोहो, दुई बर्षमै कस्तो अर्कै हुनुभएछ बाबु त”, एरपोर्टमा लिन अाउनु भएको काकी ले मलाई देखेर भन्नु भो“ह्याण्डसम भएर अाएछ नि अमेरिका बाट”, काका ले थप्नु भयो“सप्पै म्याकडोनाल्को करामत हो काका”, मख्ख पर्दै मैले नि अाफ्नो बढाई हाँकेहुन नि अमेरिकाको हावापानी ले १८ बर्षे मेरो ज्यानलाई दुई बर्षमै अर्कै बनाईदिएको थियो। दुई बर्ष अगाडि अमेरिका जाँदा दुब्ले पातुले फू गर्दा ढल्ने जस्तो, अहिले स्कुलको जिम र के के जाती खाना खाएर लक्का जवान भएर नेपाल फर्किएको मलाई देखेर काका काकी आश्चर्यचकित किन नहुन। फेरि ज्यान स्यान पनि मिलेको, लम्बाई पनि लगभग छ फिट, अनुहार नि हेर्न लायकको, ताक परे फिल्मको हिरो नै बनुला जस्तै देखिन्थे।अमेरिकाको गफ गर्दै काका को गाडीमा काकाको घरमा पुगियो — सितापाईला मा। बुबा आमा र मेरा दाई दिदी सबै अमेरिकामै भएको ले १ महिने नेपाल भ्रमण काका कै घरमा बसेर बिताउने प्लान गरेको थिएँ। काका काकी वाहेक उनका दुई छोरा छोरी थिए। भर्खर ९, १० बर्षका। काका काकी दिउँसो अफिस जाने, अनि बच्चा हरु सबै स्कुल जाने भएको ले अाफू प्राय एक्लै भईएला जस्तो थियो घरमा। भएका साथी भाई हरुपनि कता कता पुगिसकेका थिए्। कसरी एक महिना बिताउने होला भन्ने सोच्दै काकाको घर भित्र छिरियो। काकाको घर बडेमान को थियो, म अमेरिका गएपछि फेरि तल्ला थपेर झन् बडेमानको बनाएका रहेछन घर। त्यही घरमा एउटा कोठा हरीमाया दिदीलाई दिनुभएको रहेछ। हरिमाया दिदी को बुढाले हरिमाया दिदी र उनका दुई छोरीहरुलाई छोडेर दुबाई तिर लागेर उनीहरुको अलपत्र भएकोले काका काकीले उनीहरुलाई त्यही घरमा एउटा कोठा दिएर बसाउनु भएको रहेछ। ४० जति पुगेकी हरिमाया दिदी देख्दा असाध्यै राम्री थिईन — दुब्ली पातली, गहुँगोरी त्यस्ती राम्री हरिमाया दिदीलाई छोडेर दुबाई जाने उनका लोग्नेलाई धिक्कार्ने मान्छे हरुको कमी थिएन सितापाईलामा। अहिले त्यही तल कोठामा बसेर, काकी लाई खाना बनाईदिने, घर सफा गरिदिने अादी गरेर जिविका चलाउनु हुदो रैछ हरिमाया दिदी ले।
अब उ र म बिचको दुरि सिर्फ १ फिट जति थियो — उसको जिउको बास्ना वातावरणमा स्पस्ट थियो। उसको अंगको नजिक पुग्दै मेरो जिउमा ४४० भोल्टको बिजुली चल्न थालि सकेको थियो — अचानक मैले सुनितालाई च्याप्प समाते र उसको गर्दनमा चुम्बन बर्साउन थाले। सुनिताले आत्तिएर छुरि र आलु भुईमा झारिन अनि चिच्चाउनै लागेकिथिन, मैले उसको मुख थुनिदिए र “sshhh” भन्दै मेरो दाईने हात उसको छातीमा राखे र अर्को हातले चाकको प्वाल, सुरुवाल को बाहिरै बाट सहलाउन थाले — मेरो ओठले अझै उसको गर्दनको चुम्बन लिदै थियो। “के गरेको यस्तो, कसैले देखे भने”, सुनिता ले आत्तिदै सोधिन। मैले केहि बोलिन, बदलामा मेरो देब्रे हात का औलाहरू बिस्तारै चाक तिर बाट उसको योनीतिर पुर्याए र सुरुवालको बाहिरैबाट उसको योनीको खाल्टोलाई सहलाउन थाले।मेरा दाईने हात भने कुर्ता को बाहिर बाट बिस्तारै उसको कुर्ता को भित्र पुगेर उसको देब्रे पोका सहलाउदै थिए। बडेमानको आँप जस्ता थिए उसका दुधका पोका — तातो तातो दुधका पोका। मेरो ओठ र जिब्रो अब उसको कानको पछाडि पट्टि र गर्दन तिर चुम्वन गर्न ब्यस्त थिए मेरो स्यानो भाई पाईन्टकै भित्र बाट सुनिताको चाकको प्वाल नजिक सल्बलाई रहेको थियो। करिब दुई मिनेट जति बेस्करि दुध र योनी माढे पछि मलाई उसको योनीबाट पानी आईरहेको आभाश भयो। अनि मैले उसलाई म तिर फर्काए। मेरो एउटा हात अझै उसको योनी माढ्नै ब्यस्त थियो। उसको डराएको अनुहार मा उनि झन् सेक्सि देखिएकि थिईन। मैले मेरो हातलाई उसको सुरुवालको भित्र छिराए — पानी ले भिजेको उसको योनी, अनी मेराे माझी औला बिस्तारै उसको चिप्लो योनी को प्वाल भित्र बाहिर गर्न थाले। “आह आह, प्लिज नगर्नुस न आह”, सुनिता बर्बराउदै थिईन, मैले मेरो ओठ उसको ओठ मा राखिदिए र अर्को हातले उसको कम्मरलाई समाते। औलाले उसको योनीमा भित्र बाहिर गर्दै म उसको ओठहरु चुस्न थाले। कति मिठा ति ओठहरु। ओठ चुम्दा चुम्दै मैले मेरो जिब्रो लाई उसको मुख भित्र छिराएर उसको जिब्रो संग मेरो जिब्रो खेलाउन थाले। उता मेरो माझि औला उसको योनि भित्र बाहिर स्पिड बडाउदै गर्दै थियो। सुनिता “आ आ” गर्दै भुईमा बस्न खोज्ने, कतै आड लगान खोज्ने प्रयत्न गर्दै थिईन, मैले भने उसको कम्मरसमातेर उसलाई बस्नै दिईन र झन जोडले योनीमा औला भित्र बाहिर गर्दै उसको जिब्रो चुस्न थाले। सुनिता “उ, उ” गर्दै थिईन। ५ मिनेट जति पछि उसको योनिले पानी छोडेको अाभाष गरे “आ आ आ”, तर मैले उसको योनीमा मेरो औला भित्र बाहिर गर्न छोडिन। केहि मिनेट भछि तल ढोका खुलेको आवाज आयो, मैले सुनितालाई त्यही भुईमा बसाँए अनि गएर टिभी हेर्न थाले। सुनिताको बहिनी माथि आईन, “ई धनिया, के भो तपाईलाई, किन भुईमा बसेको?”, रमिताले सोधिन। “खई, टाउको झननन्न भयो, अनि बसेको, केही मा छैन” म तिर हेर्दै सुनिताले भनि।मैले मुसुक्क हाँस्दै उसको योनीमा छिरेको औला चुसे र परैबाट सुनितालाई चुम्बन गरे।
१४७ रुम भित्र छिर्ने बित्तिकै मैले ढोका लगाएर सुनितालाई च्याप्प समातेर चुम्न थाले। सुनिताले पनि मलाई चुम्न थालिन। कहिले सुनिताको जिब्रो मेरो मुख भित्र हुन्थ्यो, कहिले मेरो जिब्रो उनको मुख भित्र। मेरो हातहरु उसको पोकाहरु खेलाउदै थिए, उनका हातहरु मेरो कपाल सलबलाउदै थियो। ५ मिनेट जति किस गरेपछि, मैले उसको सुरुवालको ईजार फुकाल्न थाले। सुरुवाल भुई मा झर्यो।
मैले घोडा टेकें र कुर्तालाई उठाए, उसको पेन्टिको दर्शन गर्न। सेतो सिल्की पेन्टिमा अलि अलि पानी रसाएको थियो। मैले मेरो नाक पेन्टि को माथिबाटै उसको माल तिर पुर्याए — कस्तो मिठो बास्ना उसको माल को। केहि बेर पेन्टि बाटै माल खेलाएपछि म फेरी उठें र उसलाई फेरी चुम्न थाले। बिस्तारै मैले उसको कुर्ता खोले। कुर्ता पनि भूईमा पुग्यो। अब उसको जिउमा खाली सेतो पेन्टी र सेतो ब्रा मात्रै थियो।मैले उसको जिउको सबै भागहरु चाट्ने, चुस्ने, चुम्ने गर्न थाले। त्यही क्रममा मैले मेरो टि-सर्ट पनि फुकालेर भुईमा फ्याके। मेरो जिनको प्यान्ट भित्र मेरो स्यानो भाई बडेमानको भई सकेको थियो। मैले सुनितालाई ट्वाईलेटमा लगे। उसलाई एेनाको अगाडी उभ्याएर पछाडी बाट बिस्तारै उसको ब्रा फुकालि दिए। उनका भोगटे जस्ता पोका हरु अब उदांग भै सकेका थिए। उसको पोकाहरु देखेर मलाई सही नसक्नु भयो अनि म उसका पोका हरु चुस्न थाले। त्यही क्रममा मैले प्यान्ट खोलेर सुनिताको हातलाई तानेर कट्टुको माथिबाटै मेरो स्यानोभाई को माथि राखिदिए। मेरो स्यानोभाई झन् सन्कियो। मैले बिस्तारै सुनिताको कट्टु भुईमा झारिदिए। अलि अलि झ्याउ उम्रिएको रहेछ उसको मालको वरिपरि। बिस्तारै मैले उसको झ्याउ हरु पञ्छ्याएर उसको योनी को दर्शन गरे — कस्तो राम्रो योनी — छुरीले एउटा स्यानो चिरा बनाएको जस्तो। साच्चै सुनिताले अहिले सम्म सेक्स गर्नु त परै जाओस, कान्छि अौलापनि भित्र छिराएको छैन जस्तो छ। सुनिता अझै उभ्भि रहेकि थिईन, मैले मेरो हात उसको टांगको बिचमा पुर्याएर मेरो नाडीले उसको माल माथि रगडन थाले। सुनिता आखाँ चिम्लिएर “उह उह” गर्न थालि। त्यही बेलामा मैले मेरो कट्टु फुकाले र भुईमा फ्याँके अनि सुनिताको हातलाई मेरो उदांग कण्डो माथि राखि दिएर तलमाथि गर्न थालें। सुनिताले झस्किएर आँखा खोलिन अनि मेरो कण्डो तिर हेर्दै भनिन “आम्मै, कत्रो रैछ”। मैले उसको ओठमा फेरी ओठ राखिदिए र दाईने हातको औला उसको योनी को १ ईन्च जति भित्र घुसाई दिएँ र भित्र बाहिर गर्न थाले। उसको हातले मेरो कण्डोलाई भित्र बाहिर गर्न थाल्यो। मैले उसको योनी भित्र बाहिर को स्पिड बडाउन थाले — “उह उह” सुनिता कराउदै थिईन। जति जति उनले भित्र बाहिर गर्थिन मेरो कण्डोलाई, त्यति म जनावर भएर जान्थे। मैले सहनै सकिन, उसलाई समातेर बाथरुमको बाथ-टबमा राखे — जनावरको पोजिसनमा — सुनिताले के के भन्दैथिईन, तर मैले केही सुनिन, उसको घुडां र हातहरु बाथटबमा टेकिएका थिए, मलाई जनावर जागेको थियो। त्यही पोजिसनमा मैले उसको हातहरु तानेर उसको कम्मरको पछाडीपट्टी ल्याएर समाते। अब उनी खाली घुडा ले बाथटब टेकिरहेकि थिईन। मैले एउटा हातले उसको हातहरु समातेको थिए, अर्को हातले उसको माललाई फट्याए र मेरो लौरो उसको योनीमा घुसाईदिए। “एेया दुख्यो, छोड्नुस मलाई”, सुनिता कराउदै थिईन। मैले नसुनेको जस्तो गरेर उसको योनीमा मेरो कण्डो बजाउन थाले। बाथटब भरी रगत बगी रहेको थियो। सुनिताले सहन नसकेर बाथटबमै गाला टस्याउन थालिन र रुन थालिन। मैले हानेको हानै गरे। मैले हानेको सहन नसकेर उ बाथटब मै लम्पसार परिसकेकि थिईन, तर मैले हानेको हानै गरे। बिस्तारै उसलाई मजा आउन थालेछ क्यारे अनि रुदै “उह, उह” गर्न थालिन। १० मिनेट जति हान्यो पछि मेरो झर्न लागेको थियो, मैले मेरो माल उसको योनी भित्रै राखि राखे र विर्य झर्न दिईन। विर्य झर्नलाग्दा ध्यान अर्कै तिर पुर्याउन मैले सावर खोले। सावरले बिस्तारै रगत पखाल्दै गयो। फेरी मैले सावरको मुन्तिरै उसको योनीमा बजाउन थाले। यस पटक उसलाई रमाईलो लागेछ क्यारे, “अलि बेस्कन” भन्न थालिन। मैले उसलाई अाफूतिर फर्काए, उसको खुट्टा लाई आफ्नो काँधमा राखे र बेस्सरी बजाउन थाले। “एेया, एेया, अझै बेस्सरी, आह अाह”, सुनिता चिच्याउन थालिन। एत्तिकैमा उसको योनी मेरो कण्डोमा टाईट हुदैं गयो, उनका हातहरुले मलाई अंगालो हालेका थिए, त्यहि अंगालोले मलाई तानेर मलाई सुनिताले किस गर्दै मलाई “आई लव यू” भन्न थालि। उसको आवाजपनि अलि बद्लेको जस्तो लाग्यो। सुनिताको निस्किन लागेछ भनेर मैले झन मेरो स्पिड बडाए। “आह आह आह आहहहहहहहहहहहहहहहहहहहह”, सुनिताको पहिलो अर्ग्याजम् होला, मैले पनि झन् स्पिड बडाएर र ड्याम कि ड्याम बजाउन थाले, केहि बेर पछि मेरो नि निस्किएला जस्तो भयो र मैले मेरो लौरो सुनिताको योनीबाट निकालेर सुनिताको हातमा राखिदिए र भित्र बाहिर गर्न लगाए। सुनिताले पनि कुरा बुझेछ जस्तो छ, उठेर मेरो पछाडि आई अनि हातले मेरो लौरो समातेर भित्र बाहिर गर्न थालि। १ मिनेट जति भित्र बाहिर गरेपछि मेरो नि निस्कियो। सिथिल भएर म र सुनिता सावर को मुन्तिरै बसि रह्यौं — १५ मिनेट सम्म — किस खादै, जिउलाई खेलाउदै। मैले सोंधे, “कस्तो लाग्यो त?”, “तपाई कस्तो बदमाश, जनावर जस्तै हुनुहुदो रहेछ, मलाई कस्तो दुख्या थ्यो”, सुनिताले भनिन। मैले भने “अर्को पटक म माया गरेर गर्छु”। हामीले फेरी किस खायौं अनि एक अर्काको जिउँमा सावुन लगाउन थाल्यौं।
RADI RAHI 6
Machikne Solti le daro chike chha yaar. Malai pani milayi deuna testo kt. mero email ID crezyforsex@yahoo.com ho.
Jasin Rokaya May 29, 2012 at 8:37 AM
मुजि हरुले चिक्नु चिकेका रहेछन् मलाई पनि मिलाओ न केटाहरु म नेपालग‌ंजमा छु । र मेरो इमेल jasinrokaya@yahoo.com हो ।
Feed Ur September 7, 2013 at 9:51 AM
कोही केटी चिकाउन इच्छुक छ भने सम्पर्क गरेहुन्छ feedurhole@gmail.com
Kiran Aryal June 19, 2014 at 9:43 AM
Garna KO lagi malai samparka garnu hos
COME TO SEX WORLD February 23, 2015 at 9:47 AM